Praiminisitra Ntsay Christian: “Efa ahitsy ny lesoka…” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Efa ahitsy ny lesoka…”
“Ny zava-misy amin’izao fotoana izao, fantatsika fa nifampiresaka ny governemanta sy ny Ceni. Maro ny zavatra nifampidinihana tamin’izany, indrindra ny fanitsiana amin’izay mety ho lesoka hita tamin’ny fifidianana fihodinana voalohany.” hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian teny Mahazoarivo, omaly, taorian’ny fihaonany tamin’ny delegasion’ny Vaomieran’ny ranomasimbe Indianina (COI), i Vincent Mériton.
Ny amin’ny tokony hatao, efa mandeha ny fanomanana ny amin’izany fanitsiana izany. Ny Ceni no tomponandraikitra voalohany amin’ny fifidianana fa manao tantsoroka amin’izany fotsiny ny governemanta.
Amin’ny ankapobeny, efa irosoana ny zotram-pifidianana amin’ny fihodinana faharoa. Efa betsaka koa ny lamina rehetra amin’izao fotoana izao, indrindra ny amin’ny fandriampahalemana hirosoana amin’izay fihodinana faharoa izay.
Mila mandray andraikitra ny rehetra
Mbola manao antso avo ho an’ny tomponandraikitra rehetra izy. Na amin’ny foibe izany, na amin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana. Mba hitondra tsy fitanilana izy ireo, indrindra ny filaminana sy ny fitoniana amin’ny fifidianana.
Mino sy manantena izy amin’izao ankatoky ny fifidianana fihodinana faharoa izao: mbola hanaja izany soatoavina izany ny tomponandraikitra rehetra. Mba hanome fitokisana tokoa ny vahoaka malagasy amin’izao… “Mila fitoniana sy filaminana ny fifidianana atao eto amintsika”, hoy izy.
Anisan’ny nitondra tantsoroka amin’ny fanomanana izany ny Vondrona eoropeanina, ny Vondrona afrikanina, ny Sadc… Amin’izao fotoana izao, mahita ny COI fa ny avy lavitra aza, manao tolo-tanana. Koa mampiseho ny fahavononany koa ry zareo hanampy amin’izao fifidianana fihodinana faharoa izao.